अनौठो संसार | Indrenionline.com | Page 4
नोकर्नी सँग यौन सम्बन्ध राख्दा सुगाले पोल खोलिदिएपछि…
सुगा मानिसको बोलीको नक्कल गर्न निकै सिपालु हुन्छ र सुगाले यसरी नक्कल गरेर बोलेको सुन्दा मानिसलाई खुबै मज्जा आउँछ । तर कुबेतमा एक व्यक्तिका लागि सुगाको यस्तो खुबी ठूलै संकटको कारक बनेको छ । एक स्थानीय अखबारका अनुसार उक्त पुरुषले आफ्नै घरमा काम गर्ने एक घरेलु कामदार महिलासँग अवैध यौनसम्पर्क गर्ने गरेको थियो र उक्त कुरा उसकी श्रीमतीलाई थाहा थिएन ...
युवतीसँग सुतेका पत्रकारको अण्डकोष नै गायब
पत्रकार भएपनि पनि कस्ता हुस्सु रु एकजना टेलिभिजन पत्रकारले आफ्नो अण्डकोष नै चोरी हुँदा समेत सुइँको पाएनन् । भट्टीमा एक सुन्दर युवतीसँग मस्तले रक्सी पिएर सुतेका ती पत्रकारले बिउँझिँदा मात्र आफ्नो अण्डकोष कसैले काटेर लगेको पत्तो पाए । फोटो गुगल घटना रुसको हो । पेशाले टेलिभिजन कलाकार तथा पत्रकार रहेका ३० वर्षीय दिमित्री निकोलेभको अण्डकोष चोरी भएको छ । मस्कोको ...
बाख्राले दुई टाउके पाठी जन्माएपछि ……………….
रुकुम, २१ कार्तिक । रुकुमको पेउघा गाविसमा एउटा बाख्राले २ ओटा टाउको भएको पाठीलाई जन्म दिएको छ । पेउघा गाविस–६ की यामकुमारी बिकको बाख्राले २ ओटा टाउको भएको पाठीलाई जन्म दिएको हो । उक्त पाठीलाई हेर्न स्थानियको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । यसअघि गाउँमा यस्तो घटना नभएकाले अच्चम्म मान्दै पाठी हेर्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको स्थानीय गणेश सुनारले जानकारी दिए । ...
सहवासलाई एडभेन्चर ठानेर तरह तरहका आसनमा जोडतोडका साथ सहवास गर्ने हुँदा एक पुरुषले नराम्रो परिणा भोग्नुपरेको छ । असजिलो आसनका साथ आफ्नी प्रेमिकासँग सहवास गर्दा ती पुरुषको लिंग नै भाँचियो र उनलाई अस्पताल कुँदाउनुपर्यो । घटना भियतनामको हो । डाक्टरहरुका अनुसार ती पुरुषको लिंग फेँदबाटै भाँचिएको छ । यसरी फेँदबाटै यौनांग भाँचिनु निकै दुर्लभ घटना भएको भन्दै हु चि मिन्ह ...
कुन देशमा पुरुषले महिलाको कुन अंग मन पराउँछन् ? नेपालीको रोजाइमा कुन अंग
पुरुषहरु महिलाको वक्षस्थल मन पराउँछन् की नितम्ब ? सायद यो प्रश्नको ठ्याक्कै भन्न सकिने जवाफ छैन, किनकी महिलाका अंगहरुप्रतिको पुरुषको आकर्षण व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ । महिलाका यौन सम्बद्ध अंगहरुप्रति पुरुषणको आकर्षण वा रोजाइको खोजी गर्ने क्रममा एउटा रोचक तथ्य फेला परेको छ । पोर्न साइट पोर्न हब तथा युपोर्नले एक संयुक्त अध्ययन गरेर विश्वका कुन देशका पुरुषले महिलाको कुन ...
१२७ किलोकी महिलाले यसरी पूरा गर्दिन्छिन् पुरुष ग्राहकको इच्छा
जिउको उचाइ ६ फिट ३ इन्च, तौल १२७ किलो अनि वक्षस्थलको आकार ४४ डी डी । ६३ इन्चको हिप भएकी ३८ वर्षकी एमान्डा सोलले उस्तै परे सानोतिनो जिउका पुरुषलाई त किचेरै नै मार्दिन सक्छिन् । तर भिमकाय जिउकी यी अमेरिकी मोडेलले आफ्नो त्यो जिउलाई पूरुष मार्न होइन पुरुष ग्राहकका इच्छा पूरा गरिदिन प्रयोग गरिरहेकी छिन् । इच्छा भन्ने बित्तिकै यौन ...
‘योनी’भित्र युवक अड्किएपछि…………
लक्का जवान युवा योनीस्वरुपा मूर्तिमा अड्किएपछि के हालत होला रु यस्तै भएको छ एक अमेरिकी युवालाई । त्यो पनि आफ्नै देशमा कहाँ हो र । जर्मनीको एक भिमकाय योनी मूर्तिमा उनी नराम्ररी अड्किए । समाचार अनुसार टुबेन्जेन विश्वविद्यालयमा पढ्ने ती अमेरिकी युवा विद्यार्थी दक्षिणपश्चिमी जर्मनीमा रहेको एक योनी मूर्तिमा अड्किएका हुन् । योनीमा अड्किएपछि उनलाई उद्दार कर्मचारीहरुले बल्लतल्ल त्यहाँबाट निकालेका ...